Xbin फाइल (के यो छ र कसरी खुल्ला छ)
विन्डोज फाइल प्रकारहरू
XBIN फाइल के हो?
प्रश्न: XBIN फाइल के हो?
के तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरमा XBIN फाइल फेला पार्नुभयो र आश्चर्य गर्नुहुने कुन प्रोग्राम खोल्न सक्छ? सायद कसैले तपाईंलाई XBIN फाइल पठाउनुभयो तर तपाइँ यसलाई कसरी प्रयोग गर्न निश्चित हुनुहुन्न। सायद तपाईंले XBIN फाइल खोल्न प्रयास गर्नुभयो तर विन्डोजले तपाईंलाई भन्नुभयो कि यसले यसलाई खोल्न सक्दैन।
तपाइँ एक XBIN फाईल खोल्न सक्नु अघि (यदि यो फाइल फाइल ढाँचा वा सम्पादन गर्ने उद्देश्य हो) हो, तपाइँ निश्चित गर्न चाहानुहुन्छ कि किस प्रकारको फाइल .XBIN फाइल एक्सटेन्सनलाई बुझाउँछ।
उत्तर: XBIN फाइल एक्सटेन्सनको साथ एक फाइल एक RegSupreme लाइसेन्स फाइल हो।
अन्य प्रकारका फाइलहरू XBIN फाइल विस्तार पनि प्रयोग गर्न सक्दछ। यदि तपाइँले अतिरिक्त फाइल फाइलहरू थाहा पाउनुहुन्छ जो .XBIN एक्सटेन्सन प्रयोग गर्नुहोला, कृपया मलाई थाहा दिनुहोस् ताकि म यो जानकारी अद्यावधिक गर्न सक्छु।
XBIN फाइल कसरी खोल्न सकिन्छ?
XBIN फाईल खोल्नको लागि सजिलो तरीका यसलाई यसमा डबल-क्लिक गर्नु पर्दछ र तपाइँको पीसीलाई निर्णय गर्ने कुन फाइललाई पूर्वनिर्धारित अनुप्रयोग खोल्न सकिन्छ। यदि कुनै प्रोग्रामले XBIN फाईल खोल्छ भने तपाइँसँग सम्भवतः अनुप्रयोग स्थापना स्थापित छैन जुन XBIN फाइलहरू हेर्न र / वा सम्पादन गर्न सक्दछ।
चेतावनी: ईमेल द्वारा प्राप्त कार्यान्वयनयोग्य फाइल ढाँचा खोल्दा वा तपाइँसँग परिचित हुनुहुने वेबसाइटहरूबाट डाउनलोड गर्दा राम्रो हेरचाह लिनुहोस्। फाइल एक्स्टेन्सनको सूचीबाट टाढा राख्न र किन किनकि कार्यान्वयन योग्य फाइल एक्सटेन्सनको सूची हेर्नुहोस्।
XBIN फाइलहरू Macecraft सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित इजाजतपत्र फाइलहरू हुन्। तपाईं यहाँ यी कार्यक्रमहरूको बारे थप जान्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँले XBIN फाईलहरूको बारेमा केहि थप उपयोगी जान्नुहुन्छ भने, कृपया मलाई थाहा दिनुहोस् ताकि म यो पृष्ठ अद्यावधिक गर्न सक्दिन।
सुझाव: XBIN फाइल खोल्नका लागि नोटप्याड वा अर्को पाठ सम्पादक प्रयोग गर्नुहोस्। धेरै फाइलहरू पाठ-मात्र फाईलहरू हुन् जुन अर्थ फाइल विस्तार नभएसम्म एक पाठ सम्पादकले फाइलको सामग्री ठीकसँग प्रदर्शन गर्न सक्दछ। यो XBIN फाईलहरूको साथ हुन सक्छ वा यो हुन सक्छ तर यो प्रयासको लायक छ।
यदि तपाइँ फेला पार्नुहुन्छ कि तपाइँको PC मा अनुप्रयोगले XBIN फाईल खोल्न प्रयास गर्दछ तर यो गलत अनुप्रयोग हो वा यदि तपाइँसँग अन्य स्थापित प्रोग्राम हो भने XBIN फाईलहरू खोल्नुहोस्, मेरो डिफल्ट प्रोग्रामको लागि विशिष्ट फाइल एक्सटेन्सन गाइडको लागि कसरी परिवर्तन गर्ने त्यो विन्डोजमा परिवर्तन।
XBIN फाइल कसरी परिवर्तन गर्ने:
अर्को फाइल प्रकारमा XBIN फाईल परिवर्तन गर्न को लागी दुई मुख्य तरिकाहरू छन्।
XBIN फाइललाई पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा खोल्नुहोस् र खुला फाइल अर्को फाइल ढाँचाको रूपमा बचत गर्न छनौट गर्नुहोस्।
फाइल कनवर्टर अनलाइन सेवा वा सफ्टवेयर कार्यक्रम प्रयोग गर्नुहोस् XBIN फाइललाई अर्को फाइल ढाँचामा रूपान्तरण गर्न।
XBIN फाइल खोल्ने पहिलो विकल्प समावेश गरिएको छ यो आफ्नो मौलिक कार्यक्रममा यो उपयुक्त छ किनकी यो सजिलो छ र सम्भवतः अधिक सटीक फाइल रूपान्तरणमा परिणाम हुनेछ। निस्सन्देह, यदि तपाइँसँग कुनै कार्यक्रम छैन जो XBIN फाईल खोल्छ, तेस्रो पक्ष फाइल रूपान्तरण उपकरण (दोस्रो विकल्प) धेरै उपयोगी हुन सक्छ।
महत्त्वपूर्ण: तपाई सामान्यतया फाइल एक्सटेन्सन (जस्तै XBIN फाइल एक्सटेन्सन) परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न जुन तपाईंको कम्प्यूटरले मान्यता दिन्छ र नयाँ पुन: नामाकरण गरिएको फाईल प्रयोग हुन सक्दछ। माथि उल्लेखित विधिहरू मध्ये एक प्रयोग गरी एक वास्तविक फाईल ढाँचा रूपान्तरण गर्नु पर्छ धेरै अवस्थामा।
अझै पनि XBIN फाइल खोल्न वा प्रयोग गर्ने समस्याहरू छन्?
सामाजिक नेटवर्कमा वा ईमेल मार्फत, प्राविधिक समर्थन फोरमहरूमा पोष्ट गर्दै र थप जानकारीको बारेमा जानकारीको लागि थप मद्दत पाउनुहोस् । मलाई XBIN फाईल खोल्न वा प्रयोग गर्न को लागी कुन प्रकारका समस्याहरू थाहा दिनुहोस् र म मद्दत गर्न के गर्न सक्छु भनेर देख्न चाहन्छु।
एआईटी फाइल के हो?
आईएसओ के हो?
MHT फाइल के हो?
पीसीडी फाइल के हो?
XML फाइल के हो?
एमडीई फाइल के हो?
Google लाई पूर्वनिर्धारित खोज इञ्जिन कसरी बनाउने?
एक्सेल स्प्रेडशिटमा स्तम्भ र पंक्ति शीर्षकहरू
तपाईंको ईमेल नाम कसरी परिवर्तन गर्ने?
CES 2014: नयाँ अडियोफाइल हेडफोन
यो टाइपोग्राफी र पृष्ठ लेआउटसँग सम्बन्धित छ रूपमा परिभाषा को परिभाषा
TDMA के हो? TDMA को परिभाषा
डेनोनले दुई गृह थियेटर रिसीभरलाई 2015 एस-सीरीज लाइनमा थप्छ
ओप्टामा HD28 डीएसई प्रोजेक्टर समीक्षा - भाग3- भिडियो प्रदर्शन परीक्षण
3Com हार्डवेयर समर्थन
क्रिएटिव किट प्रयोग गरेर गुगल + मा फोटोहरू कसरी सम्पादन गर्ने?
साइन अप, Xanga को लागि
8 बजेटको लागि एक बजेटमा एक महान गृह थियेटर राख्ने सुझाव
तपाइँले वेब डिजाइन सम्मेलनमा भाग लिनु भएको3कारण
सोनीको अल्ट्रा-स्यान्डर्ड सीएस-सीरीज स्पीकरहरू
मारियो कार्ट 8 को बारेमा सामान्य प्रश्नहरूको जवाफ
फोटो एपमा फोटो फिल्टर स्थापना गर्नुहोस्
कसरी एक्सेलमा मेडियन (औसत) पत्ता लगाउनुहोस्
'आईबीटीएल' अभिव्यक्ति इन्टरनेट फोरममा प्रयोग गरिएको छ
तपाईंको ब्लग पोष्टहरूमा शब्दहरू कसरी प्रयोग गर्ने
मोबाइल वेबको लागि Badoo
पृष्ठमा टेबलहरूमा पृष्ठभूमि रङहरू कसरी लागू गर्ने जान्नुहोस्